Kheyraadka dowlada hoose inta lagu gudajiray dilaaca coronavirus - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|U adeegida Bulshooyinka|Dawlada Hoose|Kheyraadka dowlada hoose inta lagu gudajiro dilaaca coronavirus
Kheyraadka maxaliga ah ee dowladaha intii lagu jiray COVID-19 dillaaca
Magaalooyinka iyo degmooyinku waa meelaha aynu ku nool nahay iyo dawladaha ugu dhow dadka. Waxay qaadayaan talaabooyin aan caadi ahayn si ay u difaacaan deggeneyaashooda inta lagu gudajiray Cudurka faafa ee 19 Boggan wuxuu taageeraa dadaalladaas iyadoo la siinayo macluumaad ku saabsan lacagta federaalka iyo tan gobolka markii ay diyaar u yihiin bulshooyinka.
Ganacsigu hada wuxuu kujiraa howsha qandaraas siinta dowladaha hoose si ay uhelaan fursado maaliyadeed oo dhowr ah iyada oo loo marayo qoondeynta gobolka ee dhaqaalaha dawlada dhexe ee Coronavirus Aid, Relief, iyo Economic Security Act ("CARES Act"): Coronavirus Relief Funds (CRF) ee Dawladaha Hoose ; iyo Deeqaha Xannibaadda Horumarinta Bulshada - Lacagaha Coronavirus (CDBG-CV).
U guuritaanka doolarkan xasaasiga ah ayaa ah mudnaan si bulshada ay u daboosho kharashaadka muhiimka ah ee ka imanaya xaaladda degdegga ah ee COVID-19.
Sanduuqa Coronavirus Relief Funds (CRF) ee Dawladaha Hoose
Bishii May, Badhasaabka Inslee wuxuu ku dhawaaqay in gobolku $ 300 milyan oo ka mid ah CARES-ka gobolka maalgelin doono dawladaha hoose ee aan helin qaybinta tooska ah ee hoos timaada Xeerka DARYEELKA. 31 Ogostost Gudoomiyaha ayaa ku dhawaaqay koror dhan $ 125 milyan oo la siiyay dawladaha hoose wadar ahaan $ 420 milyan.
Maalgelinta CRF waxaa loo isticmaali karaa in dib loogu celiyo dowladaha hoose iyadoo laga jawaabayo COVID-19 xaalada caafimaad ee deg-degga ah inta lagu gudajiro inta udhaxeysa bisha Maarso 1, 2020 illaa Oktoobar 31, 2020. Lacag celinta waxaa ka mid noqon kara kharashaadka ku baxay si loogu oggolaado dowladda hoose inay si toos ah uga jawaabto xaaladaha degdegga , sida iyadoo wax laga qabanayo baahiyaha caafimaadka ama caafimaadka bulshada, iyo sidoo kale kharashaadka looga jawaabayo amarka labaad ee gurmadka, sida taakuleynta dhaqaale ee loo fidinayo dadka ka cabanaya shaqada ama carqaladeynta ganacsiga sababo la xiriira xirnaanshaha ganacsiga ee la xiriira COVID-19.
Lacag ayaa la siin doonaa magaalooyinka iyo degmooyin ay ku nool yihiin dad kayar 500,000 oo aan u qalmin inay helaan maalgelin toos ah sida uu dhigayo Xeerka DARYEELKA. Magaalooyinka iyo degmooyinka ka hooseeya 500,000-qof ayaa heli doona qaybinta qofkiiba. Degmooyinka waxay heli doonaan qaybinta ugu yar ee $ 300,000 iyo $ 30,000 magaalooyinka iyo magaalooyinka. Qoondaynta qaybinta gaarka ah waxaa go'aamiyay Xafiiska Maamulka Maaliyadda (OFM). Si aad u hesho liis dhammaystiran ee dadka qaata iyo shuruudaha u-qalmitaanka fadlan booqo gobolka Sanduuqa Relief Coronavirus .
Deeqda Block Development Development - Lacagaha Coronavirus (CDBG-CV)
Sharciga Gargaarka, Gargaarka, iyo Badbaadada Dhaqaalaha ee Coronavirus (CARES Act) wuxuu u qoondeeyey lacag bixinta kaabayaasha horumarinta bulshada ee loo yaqaan 'Development Development Block' - Coronavirus (CDBG-CV) iyada oo loo marayo Waaxda Guriyeynta iyo Horumarinta Magaalooyinka Mareykanka (HUD) ee Ganacsiga. Deeqaha CDBG-CV1 iyo CDBG-CV2 waxaa loo qoondeeyay dhammaan magaalooyinka iyo degmooyinka gobolka oo dhan. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo gobolka Lacagaha CDBG-CV .
CRF ee Dawladaha Hoose
Tony Hanson, Ku-xigeenka Kaaliyaha Agaasimaha
Qeybta Dowlada Hoose
Kaaren Roe, Maamulaha Barnaamijka CDBG
Phone: (360) 725-3018